Fryer mmanụ n'efu ▷ Echiche na Fryers ikuku kacha mma 2022
Mmanụ Mmanụ Egwuregwu
Tefal Fry ụtọ
Tefal Actifry 2 n'ime 1
Nri nri Actifry Express
Ngwakọta kọmpat Cecofry
Fryers ndị ọzọ
Fryer mmanụ efu: echiche na nke ị ga-azụta
Ịchọrọ imeziwanye nri gị na-ahapụghị nri eghe ọkacha mmasị gị? Fryer ikuku na-ekpo ọkụ bụ nhọrọ dị mma ma ị ga-abanye na ebe nrụọrụ weebụ ntụaka gbasara ha.
Agbagharala ndị nduzi anyị nwere ụdị kachasị mma, anyị na-agwa gị otú ha si arụ ọrụ, echiche nke ndị nwalere ha na ebe ị ga-azụta ha. ọnụ ahịa kachasị mma online na Spain.
Kasị chọsiri ike
Kedu ihe kacha mma ugbu a?
Comparative fryers enweghị mmanụ
Kedu ka esi ahọrọ ya na ihe ị ga-achọ?
Kedu ka fryer na-enweghị mmanụ si arụ ọrụ?
Ọnụ ahịa fryers na-ekpo ọkụ
Ha anọwo n'ahịa afọ ole na ole ugbu a, ma a ka nwere ọtụtụ ndị nwere obi abụọ banyere obere ngwa a. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a, ọ bụ n'ihi na ị nwere mmasị na ha, mana ị maghị kedu ihe ha na-eme ma ọ bụrụ na ha bara uru na ha dabara maka ụlọ gị. Nọgidenụ na-agụ na chọpụta ozi zuru oke na adịghị ele mmadụ anya n'ihu
Ọ na-amasị anyị imeziwanye ma mara ma ọ bụrụ na anyị enyerela gị aka, ya mere, a na-anabata okwu ọ bụla, ọ bụrụgodị na ọ dị oke egwu, nye anyị nkeji 🙂
➤ Tụnyere ndị fryers na-enweghị mmanụ kacha mma
Tulee ngwa ngwa na ngwa ngwa ka ịhụ ọdịiche kachasị mkpa ma kpebie nke dabara nke ọma maka mkpa ụlọ gị.
Ego kacha elu
Zuru oke karịa
Na-arụ ọrụ 2 n'ime 1 XL
2 Mpaghara nri
Nchekwa efere efere
➤ Kedu ihe fryer na-enweghị mmanụ kacha mma n'ahịa?
Ikpebi nke kacha mma abụghị nke anyị, ebe ọ bụ na onye ọrụ ọ bụla nwere ihe ndị ka mkpa nke na-ekpebi nhọrọ.
Ihe anyị nwere ike ịgwa gị bụ na ụdị na-apụta n'elu ndị ọzọ, ma ọ bụ maka arụmọrụ ha, maka ọnụ ala ha dị ala ma ọ bụ maka inwe ego kachasị mma.
Anyị ga-ebu ụzọ hụ atụmatụ ndị kachasị mkpa nke ngwaọrụ kachasị mma na ahịa na n'okpuru nhọrọ na ụdị ndị ọzọ egosipụtara.
Olee otú anyị ga-esi họrọ ha?
Ọnụ ahịa Philips HD9220/20
XL ikuku fryer maka ezinụlọ: ya na 6,2 l nnukwu efere na 1,2 n'arọ nnukwu nkata maka akụkụ 5 - 7 usoro nri edoziri na ihuenyo mmetụ.
Ụzọ kachasị mma isi esi nri: nri dị ụtọ ma na-edozi ahụ nke nwere abụba dị ihe dị ka 90% - fry, ime achịcha, grill, anụ na ọbụna mee ka ya na onye isi ụwa zuru oke na fryer ikuku.
Ntụziaka ahaziri nkeonwe: Budata ngwa NutriU anyị ka ịchọta ntụziaka na-akpali akpali maka ibi ndụ ahụike dabere na mmasị gị - Soro usoro site na nzọụkwụ n'ụzọ dị mfe.
Crispy n'èzí, dị nro n'ime: Teknụzụ ikuku ngwa ngwa nwere ụdị kpakpando pụrụ iche na-emepụta ikuku ikuku kacha mma maka nri dị nro na nke dị nro.
Nchacha na-enweghị mbọ: Airfryer nwere akụkụ dị mma nke nwere ike ibughari
✅ Atụmatụ Airfryer egosipụtara
Ike nke 6.2
Ike 2000 W
Teknụzụ Ikuku Na-efe Ọsọ
Oge Analog na njikwa okpomọkụ
Akụkụ nchekwa igwe eji asacha efere
Ezi nzaghachi sitere n'aka ndị na-azụ ahịa
Akara ama ama na ahụmahụ
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụdị ndị na-ere nke ọma, otu n'ime ndị isi ahịa na ụdị ama ama bụ Philips HD9280 / 90 sitere na ezinụlọ Airfryer.
Ngwa a, na mgbakwunye na nkọwa ndị a na-emekarị nke ngwa ndị a, nwere Teknụzụ ikuku ngwa ngwa. Teknụzụ philips nwere ikike nke emebere iji nweta nri esi nri ọbụna na obere mmanụ.
▷ Tefal ActiFry 2 na 1
Tefal Actifry 2 na ọnụ ahịa 1
Ihe fryer na-ekpo ọkụ 2-na-1 pụrụ iche ebe a na-esi esi nri abụọ maka ịkwadebe nri dum n'otu oge; na-agụnye efere grill agbakwunyere ozugbo na ngwaahịa ahụ
Mgbasa ikuku na-ekpo ọkụ na ogwe aka na-atụgharị na-esi nri dị nro nke nri e ghere eghe na njikwa okpomọkụ na-akpaghị aka, na-enyere aka frying obere abụba; Okpomọkụ na-agbanwe agbanwe maka nsonaazụ nri ziri ezi 80 ruo 220 Celsius
9 akpaka mmemme ozugbo na ihuenyo na nnukwu aka elu; bido egbu oge ruo awa 9 ma nọgide na-arụ ọrụ ọkụ
Nkwụsị akpaghị aka mgbe ị na-emepe mkpuchi, ihe niile (ActiFry bowl, grill, cover) bụ nke mbughari na nchekwa efere; ngụ oge nwere ụda mgbaàmà
Kedu ihe dị na igbe Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1, efere mbughari na efere grill, mkpuchi mbughari, ngaji nha, ntuziaka onye ọrụ
Nnukwu ikike nke 1.5 Kg: 4/5 Ọrụ
Ike 1400 W
Mpaghara nri abụọ
Onye mmemme dijitalụ nwere LCD
4 Nchọrọ n'isi
Ihe mkpuchi transperent
Ndozi maka afọ 10
Ugbu a ikuku fryer na mpaghara nri abụọ kacha ere bụ Tefal Actifry 2 n'ime 1. Otu n'ime njirimara ndị kacha pụta ìhè na ihe nlereanya a bụ ohere nke isi nri nri abụọ n'otu oge.
Ọ na-etinyekwa a scoop na-atụgharị na-ewepụ nri na-akpaghị aka ma na-ezere iji aka mee ya. Ọnụ ahịa ya dị ntakịrị elu, n'agbanyeghị na ọ na-enyekarị onyinye dị mma.
Cecofry 4D ọnụ ahịa
Fryer nri ọhụrụ nwere usoro nri nke na-enye ohere isi nri site n'elu, site na ala ma ọ bụ n'otu oge site n'elu na n'okpuru, gbachie nri 360º ma na-ekesa okpomọkụ nke ọma.
Fryer akpaaka nke na-esighi mmanụ ọ bụla nwere mmemme 8 emebere ka ọ dị mfe iji ma ghọta: sauté, toast, fries french, oven, akwụkwọ ntuziaka, ite frying, osikapa na yogọt. Ọ na-agụnye shọvel iji kpalite na-akpaghị aka nke ị nwere ike iji obere mbọ na aka sie nri, nke abụọ a na-ewepụ.
Ngozi okpomọkụ na-agbanwe agbanwe site na 100 ruo 240º nwere ngụ oge na-arụ ọrụ site na nkeji 5 ruo 90 iji sie nri ntụziaka niile. Ọ na-agụnye menu ka ị nwee ike esi nri yogọt na okpomọkụ nke 60ºC akwadoro, na-ahazi site na nkeji 0 ruo awa 16.
Ọ nwere nhọrọ nke inwe ike esi nri abụọ n'otu oge na ọkwa abụọ ekele maka grid, na-enwe ike ijikọta ọtụtụ nkwadebe n'otu oge, na-eme ka oge dị ukwuu. Ọ nwere nnukwu efere ikike nke lita 3 nwere mkpuchi seramiiki nke nwere okpukpu atọ nke nwere ike esi nri ruru kilogram 3,5. poteto, na-egbochi nri ka ọ ghara ịrapara na ala.
Ọ na-agụnye akwụkwọ ntuziaka na akwụkwọ ntụziaka ka ị nwee ike isi nri dị iche iche n'ụzọ dị mfe na ntụziaka 40 iji mụta ka esi esi nri na ngwa mgbanwe a na ntụziaka vidiyo 8 ọzọ iji hụ na usoro vidiyo ka ọ dị mfe iji nri a esi nri. ụdị fryer. Ọ nwere ike nke 1350 W iji sie efere ọ bụla nke ọma. Ntụle nke fryer bụ: 31 x 39 x (47 cm jiri aka) x 23 cm.
Ụlọ ahịa Cecotec Lelee nkwekọrịta
✅ Cecofry 4D pụtara ìhè
Ike 1350 W
Mpaghara Okpomọkụ Abụọ kwụụrụ onwe ya
Kitchen na ọkwa 2
Ihe mkpuchi Rotary enwere ike ịpụpụ
8 Mmemme atọrọ
Akara Spanish Cecotec na-ere ahịa fryer ikuku na-ekpo ọkụ kacha zuru ezu na vasatail na ahịa Ruo ugbu a. Ikike ya sie nri abụọ n'otu oge, shọvel rotary gị mbughari na-akpali nri na ya zuru ezu njikwa dijitalụ.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile, na Turbo Cecofry 4D bụ naanị otu nwere okpomọkụ emitters abụọ, otu ala na otu elu, nke nwere onwe ya ma nwee ike ịgbalite ọnụ ma ọ bụ iche iche.
▷ Princess mmanụ na-enweghị fryer
Ọnụ ego Aerofryer XL
✅ Isi ihe dị na Aerofryer
Ikike 3.2 lita: 4/5 ozi
Njikwa dijitalụ nwere mmemme dị iche iche
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nlereanya na ezigbo uru maka ego ị kwesịrị ị na-atụle fryer a dị mma. Ọnụ ahịa ọrịre ya bụ ihe dị ka euro 125 mana na-enwekarị ego nke ahụ mere ka ọ bụrụ euro 90. Enwere ụdị ngwaọrụ abụọ nwere ntakịrị ọdịiche ị nwere ike ịhụ na nyocha anyị mere na webụ.
Ọ bụ ngwaọrụ nwere nkọwa zuru oke nke ahụ enweela nnukwu nnabata n'etiti ndị na-azụ ahịa, ndị na-enyekwa ya nyocha dị mma. Ya n'elu-nkezi ikike, ike na ya njikwa dijitalụ nwere mmemme dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị họrọ ya ị gaghị echegbu onwe gị maka nhicha, n'ihi na ọ dị mma maka ịsacha na efere efere. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe ọ bụla na-adịghị, na ọnụ na ezi echiche nke ndị ọrụ na-eme ka ọ guzo n'etiti ụdị ndị nwere ọnụahịa kacha mma.
Fryer kichin dị mma nwere ụdị nri anọ: ighe, grill, anụ, ime achịcha na gratin; belata abụba na mmanụ na nri gị
Ike 800 gr kwesịrị ekwesị maka mmadụ 3 ma ọ bụ 4 ruo 500 g nke fries oyi kpọnwụrụ mere na 15 min na 200 C gụnyere oge ikpo ọkụ.
Ọ dị mfe iji nkeji 30 nwere ike ịhazigharị oge
Ighe dị mma na-eji obere mmanụ ma ọ bụ enweghị mmanụ mgbe ị na-eghe, ị ga-esi nri dị mma ma dị ụtọ
Nwee anụrị nri e ghere eghe gị siri ike na-ejughị ụlọ ahụ na isi
✅ Akụkụ egosipụtara Fry Delight
Ikike Grs 800: 2/3 ozi
Ngwaahịa a na-arụzi afọ 10
Fryer a dị mma bụ ihe ọzọ nke ụdị dị n'etiti uru kacha mma maka ego. Pvp ya dị nso na euro 150 mana nke a na-ahụkarị bụ na ọ nwere nnukwu mbelata na ọ bụ. ihe dị ka euro 100.
Ọ bụ ngwaọrụ dabara adaba nke nwere nkọwa zuru oke iji rụọ ọrụ ya nke ọma wee nweta ya afọ ojuju nke ndị na-azụ gị. Ihe kachasị dị ịrịba ama bụ ya mfe iji, gị imewe na ihe bụ wuru ka ọ dịgide na enwere ike ịrụzi ya ma ọ bụrụ na ọ dara.
Ọnụ ahịa fryer Kọmpat ngwa ngwa
Fryer nri nke na-enye ohere iji otu tablespoon mmanụ esi nri, na-enweta nsonaazụ ahụike ka mma. Nsonaazụ pụrụiche na ntụziaka niile ekele maka teknụzụ ikuku ọkụ PerfectCook.
Na-agụnye nkata. Esi nri ruru gram 400 nke poteto n'otu oge. Mmemme na oge na okpomọkụ.
Ọ nwere thermostat ruo 200 ºC. Oge mmezi site na 0 ruo 30 nkeji.
1,5 lita ikike akpa.
Na-agụnye akwụkwọ nri zuru ezu.
✅ Kọmpat ngwa ngwa pụta ìhè
1.5 lita ikike: 2 servings max
Ike 900 W
Analog thermostat na ngụ oge
Eleghi anya na aliexpress ị ga-ahụ nke dị ọnụ ala karịa, mana ọ bụrụ na ịchọrọ mefuo obere ego Na ikuku fryer anyị na-akwado ndị Cecofry Compact Rapid nke Cecotec dere. N'ezie, ị gaghị echekwa karịa site na ịhọrọ china na ihe nlereanya a nke Companylọ ọrụ Spanish ị nwere akwụkwọ ikike afọ abụọ.
Ọ bụ ezie na ika ahụ na-ekwupụta RRP nke gburugburu 75 euro, ọ na-enwekarị ego na-etinye ya ihe dị ka euro 40. Na ọnụahịa a ọ nweghị ihe ngọpụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji mmanụ na-esi nri na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmanụ ma gbalịa nkà na ụzụ ikuku ọkụ.
▷ Kedu ụdị kacha mma?
Ugbu a ndị a bụ ụdị anọ kacha mma na Fryers na obere mmanụ maka obosara katalọgụ na maka inwe ụdị kacha ere na Spen.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ngwaọrụ ha kachasị mma na isi ihe nke ụlọ ọrụ ọ bụla pịa onyonyo a.
Philips Airfryer mmanụ fryers efu
Cecotec Cecofry mmanụ fryers efu
Tristar Mmanụ Fryer efu
Tefal mmanụ fryers efu
➤ Igwe ọkụ ikuku ndị ọzọ egosipụtara
Nweta nyocha anyị, n'ime ha anyị na-enyocha ụdị ndị ọzọ n'ụzọ zuru ezu pụtara na ahịa Spanish.
Ị ga-achọpụta uru na ọghọm, echiche nke ndị ọrụ ndị ejirila ha sie nri na ebee ka ị ga-azụta nke gị na ọnụ ahịa kacha mma.
Vpcok mmanụ fryer efu
Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D Mmanụ na-akwụghị ụgwọ
Lidl mmanụ fryer efu
Fryers mmanụ Cosori efu
Freimatic nri fryer
Tefal Actifry Express nri nri
Aịkọk mmanụ fryer efu
Kedu ihe bụ fryer enweghị mmanụ
Ọ bụrụla otu n'ime ngwa ụlọ na-aga nke ọma. N'ihi na Ha nwere ike ịkwadebe ụdị ntụziaka niile, ma ọ bụ nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ na desserts, ma na-enweghị mmanụ ma ọ bụ were naanị otu tablespoon nke ya. çNke a bụ ekele n'ihi na ha na-abịa na nkà na ụzụ ọhụrụ webatara, nke dabeere n'eziokwu na ọ ga-abụ ikuku nke na-ekesa na okpomọkụ dị elu na ọsọ ọsọ. Nke a na-eme ka nri nwee mmecha nke ọma anyị maara, mana na-enweghị itinye nnukwu mmanụ.
➤ Kedu fryer mmanụ na-efu ka ị zụrụ?
COSORI fryer na-enweghị ...
Ndụmọdụ anyị bụ ịzụta ụdị ndị na-enye ọrụ nka na Spain, dị ka Tefal, Philips, Princess, Cecotec ... Buru n'uche na ha na-emechi emechi na kọmpat ngwaọrụ doro elu okpomọkụ ma na-ata ahụhụ nke ukwuu, n'ihi ya, ị ga-enwe ekele maka inwe ebe. imezi ya ma ọ bụ ebe ị ga-azụta akụkụ mapụtara ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya. Site na ọganihu ahụ, ọtụtụ ụdị ọcha apụtala na-enweghị SAT na ọnụahịa dị iche na ụfọdụ Ụdị Ụdị abụghị nke ukwuu.
▷ Kedu nke ị ga-ahọrọ? Akụkụ ndị dị mkpa
Ihe kacha mkpa Ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ fryer ikuku bụ:
A na-ere obere ụdị, dị mma maka ndị di na nwunye ma ọ bụ ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, na ụdị buru ibu maka ezinụlọ dum, yabụ ị kwesịrị iburu nke ahụ n'uche na họrọ ikike nke dabara gị mkpa.
Ọ ka mma ịzụta fryer dị ike tupu ọ daa, n'ihi na ọ bụ ihe nwere ike ime mgbanwe àgwà na oge nri. N'ọnọdụ ọ bụla, ike dị elu abụghị ihe na-egosi na ọ dị irè karị, n'ihi na ọ dabere na ụzọ ngwaọrụ ahụ si eji ike ahụ eme ihe.
✅ Nhicha dị mfe
Mee ka ọ dị mfe ịsacha Ọ bụ ihe dị mkpa karịa ka ị nwere ike iche na mbụ, ọ bụrụ na ihicha ya dị mgbagwoju anya ma gbagwojuru anya ị nwere ike ọ gaghị eji ya mee ihe iji zere nsị.
✅ mmefu ego
Ọnụ ego a na-abụkarị ihe ị ga-eburu n'uche na ịzụrụ ihe ọ bụla, ọ dabara na ị nwere ọnụ ahịa niile, ọbụna na ụdị kacha mma.
✅ Nlebanya ndị na-azụ ahịa
Ụzọ dị mma iji nweta ihe ịzụrụ gị nke ọma bụ ịgụ echiche nke ndị na-azụ ahịa bụ ndị nwalere ha. Gbalịa ịgụ nyocha na elela naanị akara, na-emekarị na-egosipụta nke ọma n'eziokwu.
✅ Akụkụ ndị ọzọ dị mkpa
Ọ bụ ezie na ihe ndị a dị n'elu bụ isi ihe kachasị mkpa, enwere ọtụtụ atụmatụ nwere ike imeziwanye nke ọma ahụmịhe onye ọrụ na nsonaazụ nri.
Ọkwa nri dị iche iche
Scoop na-atụgharị maka mwepu nri
Mpaghara Okpomọkụ dị iche iche
Uru nke fryers na-enweghị mmanụ
Ọ bụrụ na anyị ekwuola na ọ bụ echiche na-aga nke ọma, ugbu a, anyị ga-ama ihe ndị bụ isi uru bụ, nke ga-abụ ndị ga-emecha merie anyị:
Nri dị mma karịa: Ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ, n'ihi ijeụkwụ ndụ anyị na-enwe, anyị anaghị akwụsị iri nri kwesịrị ekwesị. Nke a na-eme ka anyị na-eri nri ngwa ngwa na nke na-adịghị mma, na-ewere akụkụ buru ibu nke abụba na ahụ anyị, nke a ga-agbanwe ghọọ calorie. Ya mere, fryer na-enweghị mmanụ ga-enweta nri dị mma, na-ebelata abụba ndị a karịa 80%.
Ọ ga-azọpụta gị oge na kichin: Igwe fryer miri emi bụ otu n'ime ngwa ngwa ngwa ngwa. Ya bụ, n'ime ihe dị ka nkeji ole na ole, anyị ga-enwe efere dị njikere ma dị ụtọ. Ya mere, ọ ga-ezere iji oge dị ukwuu na kichin ma ọ bụ ịchịkwa oge. Ebe ọ bụ na nke a, ị nwere ike ịme mmemme dị mkpa dabere na nri na oge nri ya.
Obere mmefu ike: Ọ bụ otu n'ime ngwa ndị na-agaghị eji ọkụ dị ukwuu. Ya mere, na nke a, anyị nwere ike iji ya tụnyere oven.
Tinye ngụ oge: Echegbula onwe gị banyere nri ahụ, n'ihi na site na ngụ oge, a ga-agwa gị mgbe ọ dị njikere. Ma ọ bụ na i kwesịghị ichegbu onwe gị banyere okpomọkụ n'ihi na ha na-enwekarị onye na-ahụ maka okpomọkụ.
Ha dị nnọọ mfe iji: Ọ bụ eziokwu na mgbe ọ bụla anyị zụrụ ngwaọrụ anyị na-atụ ụjọ na ọ ga-esiri anyị ike iji ya, ma ọ bụghị otú ahụ. Ha nwere njikwa dijitalụ iji mee ntọala ziri ezi.
Ọ dị mfe ihicha: Dị ka ọ ga-abụ ngwa anyị na-eji ugboro ugboro, ọ dị anyị mkpa ka ọ dị mfe ihicha ma ọ dị. Enwere ike wepu akụkụ ya ma saa ya na igwe efere. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na-amasị gị site n'aka, ị ga-eji obere ncha na ogbo mee ya.
Kwuo ihe ọjọọ na-esi ísì mgbe ị na-esi nri: Ihe ọzọ dị mma bụ na ị gaghị enwe ísì ọjọọ ruo ọtụtụ awa na kichin gị ma ọ bụ anwụrụ ọkụ nke nwere ike ịpụta na ụdị ngwa ndị ọzọ.
Kedu nke ka mma, fryer enweghị mmanụ ma ọ bụ mmanụ?
Ọ bụ eziokwu na e nwere ọtụtụ obi abụọ, ma anyị ga-ewepụ ha ngwa ngwa. N'ihi na n'ikwu okwu sara mbara, anyị na-eji mmanụ frying amarala anyị ahụ ma ọ bụ mara anyị ahụ. Ma n'ime ha anyị nwere ego nke mmanụ kwuru na mgbakwunye na eziokwu na anyị ga-erikwu calorie ma ọ bụghị ihe ahụike anyị ga-ekele anyị. N'ihi nke a, fryers na-enweghị mmanụ na-adị mma ma na-enye anyị ohere ịmepụta efere na-adịghị agwụ agwụ.
Yabụ, maka uru niile ha nwere, anyị ga-anọnyere ha mgbe niile, mana ee, ọ bụ ezie na nsonaazụ ya zuru oke, ọ bụ eziokwu na ụfọdụ n'ime ha anaghị enweta nke ọma dị ka mmanụ. Kedu nke masịrị gị?
Kedu ihe fryer miri emi nwere ike ime na-enweghị mmanụ
Ighe: N'ikwu eziokwu banyere fryer miri emi, anyị na-atụ anya isi nri e ghere eghe. Ọfọn, na nke a, a gaghị ahapụ ya. Ị nwere ike ịnụ ụtọ fries french, yana nri ndị a na-eme achịcha dị ka croquettes ma ọ bụ steaks.. Ma ọ bụ na àkwá e ghere eghe nwekwara ebe dị na menu nke fryer miri emi na-enweghị mmanụ. Nsonaazụ bụ karịa ihe ijuanya na ị ga-ahụ ya n'anya.
Toast: Obi abụọ adịghị ya, njedebe nke nri ọ bụla ga-agwa ọtụtụ ihe banyere ekpomeekpo ya na anyị ga-agbasorịrị ihe ụtọ anyị. Ya mere, ọ bụrụ na-amasị gị nke na-eme ka nri dị ntakịrị crisasịa n'èzí ma na a kemmiri ihe na-eji ire ụtọ ime, mgbe ahụ ị nwekwara ike nzọ na ọrụ a na gị fryer na-enweghị mmanụ. Dịka ọmụmaatụ, anụ, dịka ọmụmaatụ, ga-abụ otu n'ime ihe ndị ga-ekele gị nke ukwuu.
Ime: Enwere ọtụtụ oge mgbe anyị na-ahụ otú fryer na-enweghị mmanụ dị ntakịrị tụnyere oven. Nke a bụ n'ihi na ọ bụkwa ikuku na-agbagharị na nnukwu ọsọ iji kechie nri. Ya mere, ọ bụ otu n'ime ụzọ isi nri kachasị ewu ewu. Ma ọ bụghị naanị maka ụfọdụ isi efere, kamakwa maka ime desserts.
Asa: Nri zuru oke adịlarị ma a bịa na fryer enweghị mmanụ. Ọ bụrụ na ị na-eche kwadebe usoro nri n'ụdị grill ma ọ bụ BBQ, mgbe ahụ, ị ​​ga-eji ọrụ a. N'ihi na ihe si na ya pụta bụkwa ihe ijuanya. Ọ bụ ezie na efere mbụ adịghị ebi ndụ na anụ, ma ị nwekwara ike ịhọrọ azụ ma ọ bụ ọbụna poteto a ṅara n'ọkụ.
Cocer: Anyị ekwuola na ọ dịghị mkpa mmanụ na mgbe anyị na-esi nri ụfọdụ, ma. Ọ bụ otu n'ime ụzọ esi esi nri kacha ewu ewu. N'ihi na ọ bụ ihe a kpam kpam ike nhọrọ na ọ bụ ihe na-amasị anyị. Na mgbakwunye, ọ dị mma ilekọta onwe anyị ma ọ bụ mee ụfọdụ nkwadebe mbụ. Ihe niile ị nwere ike iche!
➤ Nlebanya ndị ọrụ nke Air Fryers
N'ezie ị na-achọ ịmata ihe ndị na-eji frying ikuku na-ekwu. Ọtụtụ n'ime echiche dị mma, ọ bụ ezie na e nwekwara ndị na-ekwenyeghị.
Ndị ọrụ na-enweghị afọ ojuju, n'ọtụtụ akụkụ, na-eme mkpesa na mgbe a na-eji obere mmanụ na-eghe, nri anaghị anọgide dị ka nri e ghere eghe na-emebu. Nke a bụ ezi uche, mana i kwesịrị iburu n'uche.
Ị nwere ike ịgụ ụfọdụ n'ime ya nkwupụta sitere n'aka ndị zụrụ ahịa nwere obi ụtọ, ma ọ bụ ule nke i meworo onye nri:
“Ọ masịrị m na ọ na-agbacha mmanụ ahụ ma na-echekwa ya n'enweghị ikuku ruo oge ọzọ. kpo oku na-egosi ire ụtọ na ngwa ngwa. Agbalịrị m usoro ntụziaka dị iche iche na nsonaazụ na-adị mma mgbe niile. Ihe niile dị crispy ma na-acha aja aja nke ọma na mmanụ a na-eji adịghị ka nke karịrị ya. "
"Enwetụbeghị m fryer miri emi na mbụ, enwere m obi abụọ maka otú ọ ga-esi rụọ ọrụ nke ọma, ma ọ bụ otú ọ ga-esi dị unyi. Ihe a dị mma! Eji m ya mee nku. Nke kachasị mma bụ ka ọ dị mfe ịchekwa ma jiri mmanụ mee ihe ọzọ. Usoro bụ kpamkpam free nke unyi. Nhicha dị mfe n'ihi na nkata fryer, nnukwu efere na elu dị mfe iwepu na ịsacha."
"Fryer a ga-edozi nsogbu ọ bụla ị nwere na frying. Ighe asị n'ihi ísì na unyi. Ihe fryer miri emi a dị mfe ihicha dị ka ọ na-eji ma tinye ya na efere efere. Naanị akụkụ nke na-enweghị ike ịbanye n'ime efere efere bụ akụkụ nke ikpo ọkụ, nke a na-ehichapụ ngwa ngwa na sink. Ihe nzacha mmanụ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ naghị emepụta unyi, ejirila m friza, poteto, ọkụkọ, wdg ghere eghe.
"Ọ dị ezigbo mma! Ọ na-achọ obere ahụmịhe iji dozie oge iji fụọ nke ọma.
Ọ naghị arụ ọrụ kpamkpam na-enweghị mmanụ, mana ọ dị mma karịa fryers miri emi ogologo ndụ.
Asịrị m na enwere nhọrọ ndị ọzọ iji tọọ okpomọkụ dị iche iche. Digital gaara aka mma, mana ọ bụ onyinye ịtụnanya sitere n'aka enyi m nwoke, yabụ enweghị m ike ime mkpesa. "
▷ Nkwubi okwu Mifreidorasinaoite
N'uche anyị ọ bụ nhọrọ dị mma maka ndị chọrọ belata mmanụ na nri gị na-ahapụghị "e ghere eghe" kpamkpam. Ọ nwekwara ike ịbụ ezigbo ngwa ụlọ maka ndị na-amasị isi nri na oven, ma na uru na ọ dị mma karị ma dị mfe ihicha.
Ọ bụrụ na ịzụrụ ya na-eche na ị ga-eghe eghe otu ihe ahụ dị ka ụdị ejiji ọ ga-emechu gị ihuMa ọ bụghị ya, ị ga-enwe obi ụtọ na ịzụrụ, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ.
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na nsonaazụ nke ikuku na-ekpo ọkụ na-esi nri ma ị na-enwekarị ighe nke ukwuu, lelee anya. Mmiri fryer Movilfrit.
➤ Ọnụ ahịa fryers na-enweghị mmanụ
COSORI fryer na-enweghị ... Hụ atụmatụ 79.856 Nyocha Lelee nkwekọrịta
4,5L mmanụ fryer efu ... Hụ atụmatụ 158 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Aigostar Cube - Fryer ... Hụ atụmatụ 2.580 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Cecotec Fryer na-enweghị ... Hụ atụmatụ 262 Nyocha Lelee nkwekọrịta
COSORI fryer na-enweghị ... Hụ atụmatụ 11.129 Nyocha Lelee nkwekọrịta
COSORI fryer na-enweghị ... Hụ atụmatụ 14.504 Nyocha Lelee nkwekọrịta
Nke kacha mma	COSORI fryer na-enweghị ...
Ọnụahịa mma	4,5L mmanụ fryer efu ...
Ihe kachasị amasị anyị	Aigostar Cube - Fryer ...
Cecotec Fryer na-enweghị ...
Ọnụ ahịa maka Fryers ikuku mmanụ dị ala na-abụkarị karịa omenala. N'agbanyeghị nke ahụ, ọnụ ahịa dị iche iche dị oke mma, anyị nwere ike ịchọta ụdị dị ọnụ ala gburugburu 50 euro, ọbụna ndị kachasị mma nke dị gburugburu 250 euro.
Ọ bụ ezie na RRP dị elu na ụdị ụfọdụ, n'ime afọ, a na-enwekarị onyinye ole na ole nwere ezigbo ego na ụdị niile. Ị nwere ike ịhụ onyinye kacha mma ugbu a site na ịpị bọtịnụ.
Black Friday Mmanụ fryers efu
▷ Kedu ndị na-ere ahịa kacha mma?
A na-emelite ndepụta na-akpaghị aka kwa awa 24 site na ndị na-ere ahịa amazon spain
4,5L mmanụ fryer efu ...
Na egoAhịa kacha elu
Aigostar Cube - Fryer ...
▷ Ebee ka ị ga-azụta fryer nri?
Ị nwere ike ịzụta fryer gị dị mma na ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ebe ị ga-ahụ ụdị dịgasị iche iche. N'ezie, ị ga-ahụ naanị silvercrest na lidl, ọ bụghịkwa mgbe niile.
Maka ịzụrụ ihe n'ịntanetị, anyị na-akwado Amazon n'ụzọ doro anya, nke mere ka ntụkwasị obi anyị na nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'afọ ndị na-adịbeghị anya tụkwasị anyị obi. O doro anya na ị maara nnukwu e-azụmahịa, mana ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-agwa gị ihe mere o ji bụrụ otu n'ime nhọrọ kacha mma:
Ụdị ụdị na ụdị dị iche iche
Ọnụ ahịa dị mma na onyinye mgbe niile
Mbupu ngwa ngwa na ọnụ ala
Enwere ike ịlaghachi
Akwụkwọ ikike nke afọ abụọ
Echiche nke ndị ọzọ na-azụ ahịa
Mana enwere ọtụtụ ebe ịzụrụ fryer na-enweghị mmanụ dị ọnụ ala:
Amazon: Dị ka anyị maara nke ọma, nnukwu onye na-ere ahịa n'ịntanetị nwere ụdị fryers na-enweghị mmanụ ọ bụla. Ya mere, anyị nwere ike ịchọta ụdị dị iche iche, njirimara na ihe niile ịchọrọ maka mkpa gị kwa ụbọchị. Ya mere, n'etiti ọtụtụ ụdị dị iche iche, ọ bụ eziokwu na ọnụ ahịa nwekwara ike ịdị iche iche, na-azọpụta gị ezigbo tuo na ịzụrụ gị.
Ụlọikpe Bekee: Ndị nnukwu ụdị na-ezukọkwa na El Corte Inglés. Ya mere, anyị ga-achọta ụdị ndị kachasị mkpa, kamakwa ndị na-ere ahịa mgbe ụfọdụ n'ihe banyere nha ma ọ bụ akụkọ. Banyere ọnụahịa, ị nwekwara ike nweta ego karịa nke ọzọ, dabere na ụdị.
Lidl: Na Lidl ụlọ ahịa Ọ na-eju anyị anya na nzọụkwụ ọ bụla. N'ihi na ngwa dị otú a na-apụtakwa na katalọgụ ha site n'oge ruo n'oge. Igwe fryer nke na-eme ka anyị bịarukwuo nso nwere ihe niile anyị kwesịrị ime ka anyị jiri ya buru anyị. Ọ dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji. Ma ọ bụghị nanị ihe nlereanya ya ma ọ nyekwara ihe nlereanya ọzọ nke ikuku ọkụ, na nhọrọ 9 na 1. Nhọrọ abụọ zuru oke iji nwee ike imezi ha na mkpa anyị.
nrutu: N'okwu a, nhọrọ kachasị mma bụkwa ndị ị ga-achọta. Fryer na-enweghị mmanụ bụ otu n'ime ngwa ndị a kacha ere na webụsaịtị ya na mgbakwunye, ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ego na ụdị ndị a ma ama. Site na kọmpat ụdị ndị ọzọ nwere obosara maka oven. Ọnụ ahịa ga-adịgasị iche na ha niile mana ị ka ga-ahụ nhọrọ dị ọnụ ala.
Cecotec: Akara Cecotec etoola nke nta nke nta. Emeela niche n'etiti ndị a na-arịọkarị, ekele maka ngwaahịa ha nwere teknụzụ kacha aga nke ọma. Ya mere, n'ihe gbasara fryers enweghị mmanụ, a gaghị ahapụ ha. Naanị banye na webụsaịtị ya ị nwere ike ịhụ ihe niile ọ na-enye gị, na nhọrọ dịgasị iche iche nke ngwaahịa na ọ bụghị naanị maka kichina, mana maka ụlọ n'ozuzu na ọbụna maka nlekọta onwe gị. Ma a ka nwere ihe ndị ọzọ, n'ihi na ọ na-enyekwa gị nhọrọ nke ntụziaka. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịrịọ?
mediamarkt: Mediamarkt na-enyekwa gị ụfọdụ ezigbo ihe nlereanya. Karịsịa, ọ dabere na ụdị ndị a ma ama na nke nwere a ezigbo uru maka ego. Ị nwere ike ịhọrọ ihe nlereanya bụ isi ma ọ bụ nke nwere ọrụ oven ya. Ha abụọ na-eme ka nri gị dị mma na-enyere gị aka kwa ụbọchị.
Pịa iji kwado ntinye a!
(Volu: 7 Nkezi: 3.3)
Na-achọ fryer na-enweghị mmanụ dị ọnụ ala? Gwa anyị ego ole ịchọrọ imefu
⭐ Fryer na-enweghị mmanụ
81 kwuru na "Fryer enweghị mmanụ: echiche na nke ị ga-azụta"
19/08/2019 na 01:49
Ite m nwere nsogbu ma nkeji gafere ọ na-enye m E1 kedu ihe nke a pụtara
21/08/2019 na 08:51
Nnọọ. Ọ dị m nwute ịgwa gị na n'amaghị ihe nlereanya ọ gaghị ekwe omume. Ọtụtụ mgbe E1 pụtara njehie otu ma akọwapụtara ya na ntuziaka na ngalaba mmejọ ugboro ugboro. chioma
09/07/2020 na 17:02
Enwere m mmasị na fries French, anụ ezi, ọkụkọ na akwụkwọ nri toasted, ma maka ahụike ahụike, zere mmanụ buru ibu, ya mere, nhọrọ nke fryer na-enweghị mmanụ, ihe bara uru, nke bara uru na kwa ụbọchị maka isi nri n'ụlọ.
Na mgbakwunye, dị mfe ihicha ma chekwaa oge, anyị na-esi nri nke mbụ na vitro na nke abụọ na fryer ikuku.
Kedu ihe dị mma? Ọfọn, ị mara nke ọma.
09/07/2020 na 17:04
Ọ dị mma na ọ na-atọ ụtọ karịa, haha. Daalụ maka isonye. Ekele
09/07/2020 na 17:33
Ahụrụ m ha n'anya, mana nri m na-egbochi m, eribeghịkwa m nri e ghere eghe kemgbe ihe karịrị otu afọ. ???? Atụmatụ ọ bụla maka fryer enweghị mmanụ? Daalụ
09/07/2020 na 17:38
Ndewo Ana. Ị nwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ na webụ. Ọ bụrụ na mmefu ego dị mma, anyị na-akwado Tefal ma ọ bụrụ na ọ bụ adaeze siri ike ma ọ bụ moulinex na drawer na cecotec nwere paddle na-akpali akpali na atụmatụ ndị ọzọ. Ekele
09/07/2020 na 17:51
Tefal ma ọ bụ COSORI?
09/07/2020 na 20:58
Cosori nwere ngwaahịa dị mma ma bụrụ nhọrọ ka mma ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ụdị drawer. Nsogbu bụ na ọ nweghị Sat ugbu a na Spain. Nhọrọ dị mma bụkwa Tristar, nke so na otu Princess, si Netherlands. Ekele
18/07/2020 na 21:49
Nri kacha amasị m ime na fryers miri emi bụ squid
13/07/2020 na 15:08
Nri eghe ọkacha mmasị m bụ fries French.
14/07/2020 na 12:28
Nri ọkacha mmasị m maka ighe bụ croquettes.
15/07/2020 na 20:10
Nri kacha amasị m bụ mgbanaka yabasị na osisi hake. Oh na kwa nri ọkụkọ.
Ọ ga-amasị m ịnweta fryer miri emi dị otú ahụ iji sie ahụike na mfe.
Clara nke Heras
16/07/2020 na 09:01
Nri eghe ọkacha mmasị m bụ cod fritters
17/07/2020 na 11:04
Osisi ọkụkọ na-esi ísì ụtọ. Na mkpụrụ osisi mịrị amị. Agụọla m ụfọdụ fryer ikuku nwere ike ịrụ ọrụ ahụ
20/07/2020 na 00:10
Ọ ga-amasị m isi nri ọkụkọ na ibe dị mma!
11/08/2020 na 13:34
Eghe ọkacha mmasị m bụ akwụkwọ nri na tempura.
20/07/2020 na 11:46
Nri ọkacha mmasị m na fryer bụ ọkụkọ na karịsịa nku.
20/07/2020 na 11:57
Ụfọdụ chopitos ma ọ bụ ụfọdụ lace.
30/07/2020 na 19:36
Agaghị m agwụ ike iri ụfọdụ tequeños na-atọ ụtọ nke jupụtara na cheese (ha bụ ụdị Venezuela na eghe), ọ bụrụ na m merie fryer, m na-akpọ gị òkù ka ị rie ha n'ụlọ.
31/07/2020 na 10:58
Haha, nke ahụ nwere ike iwere ihe iri ngo. chioma
20/07/2020 na 12:09
Nnọọ!! Nri eghe ọkacha mmasị m: poteto, ose padron, anchovies, nkụ ọkụkọ, nku ọkụkọ ... Ahụrụ m ndị e ghere eghe n'anya!
20/07/2020 na 21:28
Nri ọkacha mmasị m bụ fries French
23/07/2020 na 10:16
Nri kacha amasị m bụ nku ọkụkọ e ghere eghe na fries.
23/07/2020 na 16:08
Ogwu ọkụkọ na-atọ ụtọ.
23/07/2020 na 16:11
Ihe kacha amasị m bụ ara a ghere eghe, na poteto e ghere eghe na-etinyeghị ya nke ukwuu na mmanụ.
24/07/2020 na 18:16
IBE NKE nduku
27/07/2020 na 03:27
Kedu ihe na-atọ ụtọ nke fries french na croquettes ma ọ bụrụ na n'elu ha na-eme ya na-enweghị abụba, ha bara ọgaranya.
29/07/2020 na 18:10
Ọ na-esi ike ịhọrọ ọkacha mmasị e ghere eghe, mana ahụrụ m nku ọkụkọ n'anya nke na-akpụ akpụ na kemmiri n'ime. Ahhhhhhmmmmmm
29/07/2020 na 18:43
Ụfọdụ poteto e ghere eghe na akwa na ham, na akwa na chorizo ​​​​, na akwa na nwa pudding; ka anyi nweta nduku sssssssssssss…
29/07/2020 na 19:04
Ndị croquettes bụ klas mbụ, na-atọ ụtọ !!!
30/07/2020 na 10:53
Enwere m mmasị na nku ọkụkọ emere na fryer na-enweghị mmanụ yana ụfọdụ fries. Dị ụtọ !!! Chicken nwere akwụkwọ nri, croquettes, wdg dịkwa mma nke ukwuu. Ka anyị hụ ma ọ dị chioma wee nweta eserese ahụ, nke m anaghị aga nke ọma na otu ụbọchị ndị a ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ.
30/07/2020 na 10:54
Ọfọn, chioma. Ekele
30/07/2020 na 17:47
Nri eghe ọkacha mmasị m bụ poteto e ghere eghe na akwa.
30/07/2020 na 14:13
Ọfọn, maka m ọlaọcha crest fryer bụ okomoko na ọnụ ahịa dị mma
Enyi m nwere ya ma amasị m ya
Aga m azụta ya
30/07/2020 na 14:18
Ihe nlereanya kachasị ọhụrụ zuru oke, nsogbu bụ nnweta dị ka ọ na-ere ozugbo. Na webụsaịtị anyị nwere ụzọ ọzọ dị mma ma ọ bụ ka mma, yana ọbụlagodi otu ụdị. Jisie na zuo.
30/07/2020 na 16:44
Nri ọkacha mmasị m… BBQ ribs na quesadillas?
Na-atọ ụtọ !!!!
30/07/2020 na 16:58
Ọ tọrọ ụtọ nke ukwuu mana esighị ya eghe, haha. chioma
ỤGBỤ NKE OKWUKWE
30/07/2020 na 17:09
Ndewo, ahụrụ m ham na akwa fries n'anya, yum yum
30/07/2020 na 17:39
30/07/2020 na 17:41
Milanesas nwere ose e ghere eghe na poteto bụ nri eghe ọkacha mmasị m.
30/07/2020 na 17:42
Omelet nduku na ọkụkọ e ghere eghe, na-atọ ụtọ! Ma karịsịa n'oge okpomọkụ na-na a picnic.
30/07/2020 na 22:05
Ndewo onye ọ bụla. Nri ọkacha mmasị m bụ skewers. N'okwu a, ejiri m n'aka na m nwere mmasị na zukini na aubergine n'ihi na ha bụ ngwaahịa abụọ mụ na nwunye m na-erikarị.
Azụtara m fryer n'ụtụtụ a, na-ebili n'isi ụtụtụ wee kwụ n'ahịrị. Ọ bụrụ na ịga otu elekere ka e mesịrị, ọ nweghị ọbụna otu fọdụrụ ...
Ekele obi ụtọ. Robert
30/07/2020 na 22:51
Nri ọkacha mmasị m bụ longaniza na ose na fries French.
30/07/2020 na 23:57
nri ọkacha mmasị m na-enweghị mgbagha… na french fries….
31/07/2020 na 10:24
salmon ọkacha mmasị m na fries
01/08/2020 na 05:11
Nri eghe ọkacha mmasị m bụ akwa, chorizo ​​​​na fries French. Ọ bụ ezie na e kwesịghị iri ya ugboro ugboro. ?
01/08/2020 na 17:15
Anyị na-erikarị ọkụkọ na batter na nri "Pilopi" yana nduku wedges. Ụmụntakịrị na-ara ha ara ... Mana mụ na di m ga-eri obere abụba XDD, anyị na-eche naanị maka ịzụrụ fryer mmanụ mana anyị ekwetaghị ka ha si arụ ọrụ ...
04/08/2020 na 08:57
Nri ọkacha mmasị m bụ aubergines e ghere eghe.
04/08/2020 na 10:24
Obi dị m ụtọ, ugbu a, m ga-enye nne m otu, nri kacha amasị m bụ ọkụkọ toro ogologo nke masịrị m, na keki ogbo lemon.
04/08/2020 na 10:42
Nri ọkacha mmasị m bụ croquettes, ihe ọ bụla ha bụ. Ha tufuru m...
04/08/2020 na 19:37
Enwere m abụọ, drawer na gburugburu nke sitere na Tefal ma enwere m obi ụtọ na ha abụọ ma ana m achọ nke ọzọ maka ụlọ m nke abụọ.
05/08/2020 na 00:06
Nri eghe ọkacha mmasị m bụ calamari a la Romana.
05/08/2020 na 04:56
Nri ọkụkọ ọkacha mmasị m
05/08/2020 na 23:52
Nri ọkacha mmasị m bụ fries French na ose.
07/08/2020 na 12:06
N'ezie na-enweghị obi abụọ ... na croquettes.
08/08/2020 na 09:08
Croquettes na osisi azụ̀ na-apụta nke ọma. Ị na-ezere mmanụ. Na bisikiiti na-apụtakwa nke ọma. Ma mmehie were ya obere.
08/08/2020 na 10:33
Nri ọkacha mmasị m bụ ọkụkọ galik, fries French na aubergines.
08/08/2020 na 12:13
Nri kacha amasị m bụ ọkụkọ e ghere eghe nke ukwuu
08/08/2020 na 14:51
Ntụziaka kachasị amasị m dị mfe: fries French !!
MONICA PASCUAL na-anụ ụtọ ya
08/08/2020 na 20:15
Nri ọkacha mmasị m na-enweghị mgbagha bụ ọkụkọ, ọ na-atọ ụtọ !!
08/08/2020 na 22:41
nri kacha amasị m bụ croquettes nke nne nne m na-eme
08/08/2020 na 23:17
Ọ ga-amasị m ịnwale prawns na gabardine, squid a la romana, anchovies marinated, na…. Ọ ga-abụ ihe obi ụtọ inwe ike iri ha n'echeghị echiche banyere ihe ha ga-eme ka m maa abụba?
09/08/2020 na 00:01
Nri eghe ọkacha mmasị m bụ nku ọkụkọ nwere fries.
09/08/2020 na 01:03
Ihe na-amasị m ime bụ nku ọkụkọ nwere ose e ghere eghe, ha na-atọ ụtọ !!!
10/08/2020 na 17:15
10/08/2020 na 18:27
Ndewo, nri ọkacha mmasị m bụ mule ọkụkọ.
10/08/2020 na 18:34
NUGET NA FRENCH FRIES, nri kacha amasị m nke obere mmụọ ọjọọ m abụọ
11/08/2020 na 12:26
Fries French na-enweghị mmanụ, ka ọ dị ụtọ na obere abụba !!!!!
11/08/2020 na 15:23
Nri ọkacha mmasị m:
Ọkụkọ achịcha na french fries.
11/08/2020 na 15:24
11/08/2020 na 18:47
Ntụziaka kachasị amasị m bụ akwụkwọ nri crispy, nri chickpea a mịrị amị na, n'ezie, fries chiiz anụ ezi bụ CHINEKE.
12/08/2020 na 09:57
Eghe ọkacha mmasị m bụ poteto; ma poteto ndị na-abụghị mmanu ma crunchis!
Maria Dolores kwuru
12/08/2020 na 16:57
Nri ọkacha mmasị m bụ fries French na nku, ọ dị m ka ya bụrụ na m ga-eme ya
12/08/2020 na 17:27
Ahụrụ m poteto na croquette n'anya
12/08/2020 na 18:05
Achịcha ọkacha mmasị m nke skwọji e ghere eghe na-adịchaghị mma na enweghị abụba
12/08/2020 na 18:44
Afere m bụ akwụkwọ nri na-enweghị mmanụ na bass siri ike
12/08/2020 na 19:45
Nri ọkacha mmasị m bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ nri junk niile, ekele maka fryer na-enweghị mmanụ ị nwere ike iri nri ahụ n'ụzọ dị mma karị.
12/08/2020 na 21:57
Nri ọkacha mmasị m abụghị nke mbụ mana ọ bụ ihe ị nwetara, fries French, haha. Hụ ma enwere m ike ịme ha n'efu na fryer na-enweghị mmanụ. Ekele
13/08/2020 na 12:06
Nri ọkacha mmasị m, ọkụkọ na curry sauce, ya na poteto na yabasị.
14/08/2020 na 21:06
Ahụrụ m nugget emere n'ụlọ n'anya.
09/01/2021 na 19:54
Akụkọ mara mma nke ukwuu, daalụ maka enyemaka !!
Black Friday Mmanụ Deep Fryers efu
Cyber ​​​​Monday fryers enweghị mmanụ
Nwebiisinka 2022 Mbupu 24h - nkwa gọọmentị - ịkwụ ụgwọ dị mfe